Genius 100 Arabica Coffee Fine Ground 110g – SUNNY eSTORE
Genius 100 Arabica Coffee Fine Ground...
Genius 100 Arabica Coffee Fine Ground 110g
၁၀၀% Arabica ကော်ဖီဖြစ်ပြီး အမျိုးအစားအဆင့်(၈၃)နှင့် အထက်ရှိသောအရည် အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန် ဖြစ်သည်။ ၁၁၀ ဂရမ်ရှိပြီး အတော်အသင့်လှော်ထားသော မြန်မာပြည်ထုတ် ကော်ဖီဖြစ်ပါသည်။ အရသာမှာ အနည်းငယ်ပိုချို၍ ချဉ်သော အရသာဖြစ်သည်။
100% Arabica Coffee, Special Grade (83) and above, High Quality Product, 110g, Medium Roasted Coffee, Product of Myanmar, Slightly more sweet and sour taste.
Includes: 1 pack of Genius 100% Arabica Coffee 110g Fine Ground
Perfect for French Press and Expresso. You can also use inacoffee machine.